Fialana fotoana 6K mampiseho ny fanombohana ny roketa SpaceX | Famoronana an-tserasera
Ny elanelam-potoana dia misambotra ny fandefasana ny roketa SpaceX
SpaceX dia tsy misy ifandraisany amin'ny lohahevitra lehibe amin'ity bilaogy ity, fa raha jerentsika izany amin'ny mason'ny fakantsary sy ny fahaizany mandray fotoana-kelikely hitehirizana an'io teknolojia mahagaga io mandrakizay izay mahagaga antsika rehetra, afaka mamela toerana kely isika hanehoana ireo saripika ireo.
Ny roketa Falcon 22 an'i XpaceX dia natomboka tamin'ny 9 desambra teo amin'ny toby akaikin'i Santa Barbara, Kalifornia. Ity zava-misy ity namadika ny lanitra California ho seho maivana izay maro no afaka nanatrika. Betsaka no nilaza fa ho UFO na sambo vahiny izy io, fa raha ny tena izy dia fitaovana ara-teknolojika olombelona izay manokatra faravodilanitra hafa amin'ny hazakaza-habakabaka.
Jesse Watson dia nanangana a andian-tsary tsy mampino hahitana ny fotoana ialàna ny fandefasana balafomanga ary afaka nisambotra ireo tadin'ny setroka izay nanadihady ny lalan'izy ireo nivoaka tamin'ny tany.
Watson dia nampiasa ny Google Maps hahitana ny toerana mety indrindra amin'ilay fitifirana. Roa ora alohan'ny fandefasana dia afaka nitifitra tifitra i Watson nandritra ny 45 minitra mba hanana ny rehetra horonantsary ilaina hamoronana fe-potoana hamela antsika ho moana io.
Nampiasa fakan-tsary efatra samihafa izy mba hisamborana ny zoro faharetan'ny fotoana. sokajy nampiasa sary 1.315 tamin'ny tifitra 2.452 XNUMX mamorona fe-potoana 6K artista amin'ny fandefasana balafomanga. Ka dia nosoratany ny iray amin'ireo dingana amin'ny fikarohana eny amin'ny habakabaka mba hahafahan'ny olona iray hidina amin'ny planeta Mars indray andro.
Ny fe-potoana mampiseho ny halo navelan'ny balafomanga rehefa mihazakazaka izy hialana amin'ny fahitana ary amin'izay dia ho lasa fitsapana iray hafa izay tanterahin'ilay sampan-draharahan'ny habakabaka SpaceX miaraka amin'ny tanjona voalaza fa afaka mitsangatsangana any Mars indray andro any isika toa ny any London na New York.
Manana ny Facebook an'i Jesse Watsonny Instagram ary ny azy Web.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » sary » Ny elanelam-potoana dia misambotra ny fandefasana ny roketa SpaceX
Ny toetran'ny Babina izay manazava tsara ny tandindon'ny tanàn'izao tontolo izao